Ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo dhagax dhigay dhismaha wasaaradda qorsheynta - Halbeeg News
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya oo dhagax dhigay dhismaha wasaaradda qorsheynta
MUQDISHO(HALBEEG)- Ra’iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa maanta dhagax dhigay dhismaha cusub ee wasaaradda qorsheynta, maalgashiga iyo horumarinta dhaqaalaha dalka.
Dhismaha wasaaradda qorsheynta xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa waxaa iska kaashanaya dowladda Soomaaliya iyo dowladda Qatar.
Ra’iisul wasaaraha Soomaaliya Xassan Cali Kheyre ayaa sheegay in xukuumadda ay ka go’an tahay sidii dib u dhis loogu sameyn xarumaha dowladda.
“Waxaan maanta joogna dhax dhiga xaruntii hore ee wasaaradda qorsheynta, waan u mahad celinaya dowladda Qatar iyo Safiirkeeda oo dhismahan kaalin ka geysanaya, wasiirka qorsheynta waa u mahad celinaya sida uu iskugu howlan arintan, tan waxay qeyb ka tahay dadalada xukuumadda ugu jirto dib u dhiska xarumaha dowladda” ayuu yiri ra’iisul wasaaraha Soomaaliya.
Xassan Cali Kheyre ayaa tilmaamay in dowladda aysan kaligeed wax dhisi karin islamarkana shacabka Soomaaliyeed looga baahan yahay inay ka qeyb qaatan dib u dhiska.
Wasaaraddaha dowladda federaalka ayaa intooda badan ku shaqeyn xarumooda kuwaasoo xiligan uu ka muuqdo bur burkii ka soo gaaray dagaaladii ka dhacay dalka, iyadoo hadda wasaarad kasta ay wado sidii xarunteedii dib u dhis ugu sameyn laheyd.
Dad ku dhintay shil diyaaradeed oo ka dhacay Koonfurta Sudan